Aurora Borealis muDenmark | Absolut Kufamba
La Mwenje yekuchamhembe kuDenmark Icho chiitiko chechisikigo chinokwezva zviuru zvevashanyi gore rega rega. Mwenje inoshamisa yemavara inozadza matenga ayo yakafanana inogona kuonekwa kune dzimwe nyika dzeScandinavia dzakaita seNorway, Sweden kana Finland. Nekudaro, vazhinji vanotenda kuti mwenje iyo inogona kuoneka mudenga reDanish yakanyanya kunaka.
Zvisinei, kushamisika uku hakuonekwi mazuva ese. Mwenje yekuchamhembe muDenmark inongowanikwa pane imwe nguva yegore uye kwete kana mazuva ese, sekuonekwa kwavo kunoenderana. Kana iwe uine rombo rakaringana kuenda kuDenmark uye uchikwanisa kunakidzwa nechishamiso ichi, iwe unotora chiratidzo chausingazombokanganwa.
1 Chii chinonzi Mwenje wekuchamhembe?
2 Nguva yekuona iyo Mwenje yekuchamhembe kuDenmark?
3 Nzvimbo dzekuona Mwenje wekuchamhembe kuDenmark
4 Maitiro ekupikicha ekuMusoro Mwenje
Chii chinonzi Mwenje wekuchamhembe?
Iyo aurora borealis (inonziwo polar aurora) chiitiko chakasiyana chemuchadenga chinozviratidza muchimiro che kupenya kana luminescence mudenga rehusiku. In the hemisphere yekumaodzanyemba inozivikanwa se maodzanyemba aurora.
Munguva dzekare zvaifungidzirwa kuti aya mwenje asinganzwisisike ekudenga aive neakabva kunaMwari. MuChina, semuenzaniso, ivo vaizivikanwa se "makava edenga." Chete kubva regumi nenomwe remakore akatanga kudzidza Chiitiko kubva yesayenzi nemaonero. Isu tinokwereta izwi razvino rekuti "aurora borealis" kune wechiFrench nyanzvi Pierre Gassendi. Makore zana gare gare, wekutanga kubatanidza chiitiko ichi nePasi remagineti yaive maBritish Edmund halley (iyo imwechete iyo yakaverenga kutenderera kweHalley's comet).
Mwenje yekuchamhembe kuDenmark
Nhasi tinoziva kuti Mwenje yekuchamhembe inoitika kana kuburitswa kwemagetsi ezuva akabatana ne magnetosphere yePasi, mhando yenhoo inotenderedza nyika muchimiro chemagineti kubva kumatanda ese. Kubonderana kuri pakati pegasi rinobuda mumhepo mudenga nemaranzi akakwenenzverwa kubva kumwaranzi yezuva kunoita kuti vaburitse simba nekuburitsa mwenje. Izvi zvinogadzira yakajeka mimvuri yegirini, yepingi, yebhuruu nepepuru kutamba mudenga Uku "kuparara" kunoitika pakakwirira kubva pamazana zana kusvika mazana mashanu emakiromita pamusoro penyika.
Nguva yekuona iyo Mwenje yekuchamhembe kuDenmark?
Kunyangwe zvikaitika mukati megore rose, Mwenje yekuchamhembe inongoonekwa pane dzimwe nguva. Nguva yakanakisa yekuona Mwenje yekuchamhembe muDenmark ndeye pakati pemwedzi waApril naSeptember. Munguva ino yegore, iyo yekuchamhembe hemisphere zhizha, husiku hwakasviba uye denga harina makore.
Manheru uye mushure mekuvira kwezuva ndipo apo mwenje yemashiripiti inotanga kuoneka. Mwenje yekuchamhembe (inozivikanwa kuvaDanes se Nordlys) shamisa vatorwa, kunyanya avo vanobva kune dzimwe nzvimbo uye vasina kumboona chiitiko ichi pamberi.
Nehurombo, pamazuva ane dutu kana kana uri Muvhuro, zvinoita zvisingaite kuona mashiripiti emagetsi ekuchamhembe. Kana paine dutu, haugone kuona Mwenje yekuchamhembe, sezvo denga rakajeka kuti mavara aro anyatso kuratidzwa kune ziso remunhu.
In inotevera timelapse vhidhiyo, yakatorwa mukati Limfjord Muna 2019, iwe unogona kukoshesa kuzara kwesimba kwechiitiko chechisikigo:
Nzvimbo dzekuona Mwenje wekuchamhembe kuDenmark
Heano dzimwe dzenzvimbo dzakanakisa dzekuona Mwenje wekuchamhembe kuDenmark:
Zvitsuwa zveFaroe. Munzvimbo iyi yezvitsuwa iri pakati peNorth Atlantic neGungwa reNorway, hapana kana kusvibiswa kwechiedza.
Grenen Iyo peninsula diki iyo iri munzvimbo yekuchamhembe kwakanyanya kwenyika yeDenmark. Pamusoro peiyo latitude, chinoita kuti nzvimbo ino ive yakanaka yekutarisisa kusavapo kwechiedza chakagadzirwa kubva kunogara vanhu.
Kjul Strand, gungwa refu kumucheto kweguta re Hirtshals, kubva uko maferi mazhinji anoenda kuNorway.
Samsø, chitsuwa chiri kumadokero kweCopenhagen uye chinozivikanwa nemagariro ayo akachengetedzwa. Icho chimwe cheakanakisa nzvimbo dzepanyama dzeDenmark.
Maitiro ekupikicha ekuMusoro Mwenje
Anenge munhu wese anopupurira aurora borealis muDenmark anoedza kutora runako rwechiitiko nemifananidzo yavo kana mavhidhiyo makamera, vachitora mashiripiti ayo zvachose.
Kuti mufananidzo unyoreswe nenzira kwayo, zvinotarisirwa shandisa nguva refu yekuratidzira. Mune mamwe mazwi, iyo shutter yekamera inoda kugara yakavhurika kwenguva yakareba (masekondi gumi kana kupfuura), nokudaro ichirega kupenya kwakawanda mukati.
Zvakakoshawo shandisa katatu kuona kudzikama kwekamera panguva yekuratidzira.
Zvisinei nezvose, uye kunyangwe zviine mavhidhiyo nemifananidzo zvinofamba zvakadii, hapana chingaenzaniswa nekunzwa kwekutarisa mwenje yemweya yemwenje yekuchamhembe ichitenderera mudenga, pamusoro pemisoro yedu. Chiitiko chinokodzera kunakirwa kana kamwe chete muhupenyu hwako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Aurora Borealis kuDenmark
Iyo Tudor yakasimuka, ruva reEngland ruva